NgoSeptemba 2020-Funda ukuRhweba
Inyanga: Septemba 2020
I-EUR / CHF iQalisa kwakhona iDowntrend, iNqanaba leThagethi 1.0759
Ukuhlaziywa: 1 October 2020
I-EUR / CHF ikwiintshukumo ezibophelelayo. Imakethi iyatshintsha phakathi kwenqanaba le-1.0750 kunye ne-1.0850. Indlela esecaleni iqhubekile ukusukela ngoJulayi. Umgca wendlela yokuqhubela phambili utsaliwe ubonakalisa amanqanaba enkxaso yentengiso. Ixabiso liyenyuka kwaye lisondela kwinqanaba le-1.0793.
Esi sibini sikwinqanaba lama-54 le-Index ye-Relative Strength period 14. Kuthetha ukuba imarike ikukuhamba ecaleni nangaphezulu komgangatho osembindini wama-50. Ibonisa imeko esecaleni.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isibini ngoku sihamba phantsi. Ikhandlela eliluhlaza lavavanya inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci eyi-78.6%. Ibonisa ukuba esi sibini siza kuwa kwaye sifikelele kwinqanaba le-1.272 yokwandiswa kweFibonacci. Owona mgangatho usezantsi ngu-1.0759.
Iintsuku ezingama-50 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-21 zihamba ecaleni zihamba ecaleni zibonisa imeko yangaphambili. Isibini singaphantsi kwe-50% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba intengiso ikwi-bearish umfutho.
I-EUR / CHF kukuhamba ecaleni kodwa iqale kwakhona ngokuhla. Esi sibini sijongane nokwaliwa kwinqanaba le-1.0820 njengoko iqala kwakhona ukuya ezantsi. Ngokokuhlalutya kwesixhobo seFibonacci, i-EUR / CHF inokuthi ifikelele kwizantsi le-1.0759.
Ukunyaniseka okuphantsi ekupheleni kweNyanga, i-Dollar Falls Njengeenguqu zoTshintsho kwi-US Economy
Ukuhlaziywa: 30 Septemba 2020
Iimarike ze-Forex ubukhulu becala zikuluhlu oluqinileyo namhlanje, ngaphandle kwempendulo encinci kulindeleke ukuba kuqeshwe e-US kunye nedatha ye-GDP yaseCanada. Kwakungekho ntshukumo mncinci emva kwezimvo ezivela kuMongameli we-ECB kunye ne-Chief Economist yeBhanki yaseNgilani. Urhwebo olubuthathaka ekupheleni kwenyanga kugcina ukungazinzi kuphantsi kakhulu. Nangona kunjalo, siyathemba ukuba u-Okthobha uza kuqalisa ngamanyathelo athile xa kunikezelwa ngedatha ebalulekileyo njenge-US ISM kunye nomvuzo wasefama.
Idola kunye ne-yen ziyachacha kwiseshoni yaseAsia, kodwa akukacaci ukuba ukubuyela umva kuya kuphela kule veki. Kwakungekho mpendulo kwingxoxo kamongameli phakathi kukaDonald Trump noJoe Biden. Iimarike zaseAsia zixutywe ngaphandle kwedatha eyomeleleyo evela eChina. Ixesha elizayo le-Dow ngoku liphantsi malunga ne-200 yamanqaku, kodwa bakude kuyo.
Okwangoku, kugxilwe kwidatha yezoqoqosho, ukuqala ngengqesho ye-ADP namhlanje, ukuveliswa kwe-ISM ngomso, emva koko umcimbi omkhulu wemisebenzi engeyiyo yefama ngolwesiHlanu.
Ingxelo ye-ADP yase-US ibonakalise ukwanda kwenani lemisebenzi kwicandelo labucala ngamawaka angama-749. NgoSeptemba, ngaphezulu kunokuba bekulindelwe kuma-650 amawaka. Ngobungakanani beenkampani, amashishini amancinci ongeze i-192 lamawaka, ama-Medium - 259 lamawaka, amakhulu - angama-297 amawaka. Icandelo lemisebenzi kwimveliso yempahla inyuke nge-196 lamawaka, kwicandelo leenkonzo- ngama-552 amawaka.
"Imakethi yezabasebenzi iyaqhubeka ukubuyela ngokuthe ngcembe," utshilo u-Ahu Yildirmaz, usekela-mongameli kunye nomphathi-mlawuli we-ADP Research Institute. “NgoSeptemba, uninzi lwamacandelo kunye nobukhulu beenkampani zabonisa ukukhula kurhwebo, ezothutho kunye nezixhobo; kunye nemveliso ngaphambili. Nangona kunjalo, amashishini amancinci aqhubekile nokubonisa ukukhula kancinci. ”
I-Dollar Falls kwiSentiment ehambelana nomngcipheko
Kwiimarike zezemali, uvakalelo lwengozi lukhokelela kwindlela njengoko idola liguquka phakathi kwenzuzo kunye nelahleko. Umngcipheko wokutya uphakame eMelika ngale mvakwemini phakathi kwamathemba ahlaziyiweyo e-US coronavirus package, kwaye ngexa uSenator McConnell esithi iiRiphabhlikhi kunye neeDemokhrasi zikude nokulwa nentsholongwane, uvakalelo luhleli lunethemba. Phambi kokuvalwa, uMphathiswa wezeMali uMnuchin wabhengeza ukuba akusekho sivumelwano ngoku.
Idola yaseMelika ilahlekelwe ngumhlaba ngokuchasene uninzi lwembangi zayo eziphambili phakathi kokuphucula imeko. Nangona kunjalo, isibini se-EUR / USD sivalwe malunga ne-1.1720. Iponti / idola yesibini inyukile ngaphandle kokukhathazeka malunga nokuqhambuka kwe-coronavirus e-UK.
tags forex Market, Ingxelo ye-ADP yaseMelika, KwiDola yaseMelika
I-Bitcoin iphela ngoSeptemba kwi-Bias engapheliyo
I-Bitcoin (i-BTC) kunye nayo yonke intengiso ye-cryptocurrency ibithengiswa ngobunkunkqele kwiintsuku neeveki ezimbalwa ezidlulileyo, iinkunzi zeenkomo kunye neebhere zisilele ukwenza indlela ecacileyo kwikota ekufuphi.
I-cryptocurrency ebekiweyo ibikuluhlu lokurhweba phakathi kwe- $ 10,200 kunye ne-11,000 yeedola uninzi lweyoMsintsi. Ukungabikho kwexesha elide kukho nakuphi na ukungazinzi kubangele ukuba uluhlu lwezorhwebo lube nekhontrakthi nangaphezulu ukuya kwi- $ 10,600 kunye ne-10,800 yeedola ukusukela kwiveki ephelileyo.
Abahlalutyi abaqinisekanga ngento enokubangela ukungazinzi okubalulekileyo kwi-cryptocurrency kwiintsuku nakwiiveki ezizayo.
Okwangoku, omnye umhlalutyi ukhankanye iphethini yembali njengophawu olunokubakho lwe-BTC. Ucacisa ukuba intshukumo exhaphakileyo esecaleni kwiBitcoin yenzeka ngezantsi kwenqanaba eliphambili lokumelana. Ngokwesiqhelo, oku kubonisa ukuba iinkunzi zeenkomo zibeka isiseko sentshukumo yokuqhushumba ephezulu.
Ukudityaniswa kweBitcoin okwangoku kwenzekile apha ngezantsi kwenqanaba le-11,000 lamaxabiso aphikisayo. Umhlalutyi uqaphele ukuba ukudityaniswa okudlulileyo kweBitcoin kwenzeke ngaphezulu komda we-11,000 yeedola, obangele ukuba i-cryptocurrency yehle kwinqanaba le-9,900 leedola kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo.
Amanqanaba aphambili eBTC okuBukela kwiXesha eliFutshane
I-cryptocurrency ebekiweyo ngoku ichithe uninzi lwale veki ukudibanisa phakathi kwe- $ 10,600 kunye ne- $ 10,800. Njengoko bekutshiwo ngaphambili, uluhlu lokudityaniswa luye lwenziwa ikhontrakthi kwezi veki, ubukhulu becala ukurekhoda ukuphakama okuphezulu. Olu luphawu olulungileyo lokuba i-rally ye-bullish ikufutshane nekona ye-asethi yedijithali. Ukuba ulwenzo olwenziweyo alwenzeki kwakamsinya, sinokubona okunye ukungangqinelani kolu didi lokudityaniswa kwiintsuku ezizayo.
Okwangoku, kubonakala ngathi i-BTC yenze indawo ebaluleke kakhulu kwimigca ye-50 SMA kwi- $ 10,650.
Imali iyonke yentengiso: $ 344 billion
Ulawulo lweBitcoin: 57.5%
IFransi 40 (FR40EUR) Iqala kwakhona iDowntrend, iBreaks Range-Bound Move
IFransi 40 isalathiso sikwiimeko ezibophelelayo. Isalathiso sitshintsha nje phakathi kwamanqanaba angama-4800 ukuya kuma-5200. Ukusukela ngoJuni, imarike iseza kuhamba; kunokuba ixabiso ngoku liyadityaniswa embindini wexabiso. Amaxabiso aqhekeza ngaphantsi kwenqanaba lenkxaso kwaye aqala phezulu.
Isalathiso okwangoku sikwinqanaba lama-41 laMandla oMbane aMandla aMandla exesha le-14. Kummandla weDowntrend nangaphezulu komgangatho osembindini wama-50. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 zithambeka emacaleni zibonisa imeko esecaleni.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isalathiso sihamba ecaleni. Ixabiso liphule inqanaba lenkxaso kwaye liqala kwakhona ukuhla. Imakethi ikwixabiso lentengo.
Isalathiso okwangoku singaphantsi kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Isalathiso sikwi-bearish umfutho. Umndilili ohambahambayo usathambeka ngokuthe tyaba ukubonisa imeko esecaleni.
I-FR40EUR iqale kwakhona ukunyuka isiya ezantsi njengoko ifike kumazantsi e-4690. Intengiso inyuke yaya kwinqanaba lama-4830. Le ntshukumo inyusileyo isise isalathiso kwingingqi yentengo ethengisa kakhulu.
I-GBPJPY Gcina iBullish Bias ngaphaya kweNqanaba le-136.00, njengeMeko yokuPhuhla
Uhlalutyo lwamaxabiso e-GBPJPY-Septemba 30
GBPJPY is ukwanda kuba le 5th ngosuku in a umgca lo gama u kugcina a bukhoma ukunyaniseka ngaphaya le 136.00 kwinqanaba. Ngaphambili, le idiphu-ukuthenga ndincedile ukuba umda ikhona enentsingiselo isilayidi kufuphi le isitshixo 135.00 yengqondo amanqaku as zeenkomo are kubonwa kwezigqibo a olutsha Umzamo as ngesantya lula.
ukuxhathisa Amanqanaba: 147.95, 142.71, 136.62
inkxaso Amanqanaba: 133.12, 131.75, 129.29
I-GBPGPY yexesha elide iTrend: Ukutshintsha
I-GBPJPY ingaqala ukudibanisa phakathi kwe-135.00 kunye ne-136.62 yamanqanaba. Ukuba izama ukophula kwaye iqhubeke ngaphezulu kwamanqanaba ayi-136.62 ukukhula ngakumbi kubonakala kunokwenzeka. Injongo yokuqala ibonwa kwinqanaba le-136.62, ekhokelwa kwinqanaba le-137.84.
Ngethuba nje inqanaba lokumelana li-147.95, ukuqhekeka okunokubakho kwicala eliphantsi kuhlala kulungelelwano. Nangona kunjalo, ulwaphulo olwenziweyo lweempawu ze-147.95 zinokunyusa ukubuyela umva kwexesha elide. Ugxininiso lokuqinisekiswa lunokutshintshelwa kwinqanaba le-156.59 lokumelana.
Ukubuyiselwa kwe-GBPJPY kwinqanaba le-133.04 kusaqhubeka kwixesha leyure ezi-4, kodwa ukuza kuthi ga ngoku kuyasilela ukuthatha inqanaba lokumelana ne-136.62. I-intraday bias ihlala ingakhethi cala kwaye inokudlala ngokulungisa ngakumbi. Ukuwa kwinqanaba le-142.71 kunye neenjongo ezingama-61.8 zepesenti ukusuka kwi-123.99 ukuya kwi-142.71 kumanqanaba e-131.75 kunokuqhubeka nokwaphuka kwenqanaba le-133.04 kwicala elingezantsi.
Nangona kunjalo, ukubuyela kwimeko yesiqhelo, ukwaphula ngokuqinileyo inqanaba le-136.62 kunokuthetha ukubola kwexesha elifutshane kwaye ubuyisele umva kwicala eliphambili. Ukuba ukwehla kubangelwa kukutshintsha okwangoku kwi-GBPJPY, eyona nkxaso iphambili yokulandela umkhondo ibonakala kumanqanaba ebhendi ye-134.12 / 50.
I-USD / i-CAD yokuHamba yokuHamba ngobuso kwiNqanaba 1.3400
Amanqanaba enkxaso ephambili: 1.3400, 1.3200, 1.3000
I-USD / i-CAD yeXabiso leXesha elide: Bullish
Esi sibini siphinde saqala ukuya phezulu. ILoonie ngaphambili yayikudolophu ephantsi. Iwele kwinqanaba le-1.2980 kwaye yaqala kwakhona i-uptrend. I-uptrend yangoku ijongene nokuchasana kwinqanaba le-1.3400. Iimarike ziya kunyuka emva kokuba ixabiso lifumene inkxaso.
I-SMA yeentsuku ezingama-50 kunye neentsuku ezingama-21 ze-SMA zihle ziye ezantsi zibonisa imeko yangaphambili. ILoonie iwele kwinqanaba lama-55 le-Index yamandla ahlobene. Esi sibini ngoku sikummandla ophakamileyo kwaye ngaphezulu komgangatho ophakathi 50.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isibini ebesikade sikwi-uptrend. Ukuvuselelwa kuphelisiwe kwinqanaba le-1.3400. Okwangoku, iwele kwinqanaba le-1.3324. Umzimba wekhandlela oluhlaza uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci eyi-78.6%. ILoonie iya kuwa kwaye ifikelele kwinqanaba le-1.272 yokwandiswa kweFibonacci. Ngamanye amagama, iya kuphakama kwaye ifikelele kwinqanaba le-1.3298.
I-USD / USD-4 Itshathi yeYure
Okwangoku, ii-SMAs zihamba kancinci zibonisa ukuba intengiso iyenyuka. ILoonie ingaphantsi kwenqanaba lama-40% ye-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba intengiso ikwi-bearish umfutho.
I-USD / i-CAD ngoku iwa emva kokumelana kwinqanaba le-1.3400. ILoonie iqalele phezulu kodwa ukuthengisa uxinzelelo kuyaqhubeka. Ngokwesixhobo seFibonacci, imakethi iya kufikelela kwizinga eliphantsi le-1.3298.
Imijikelo ye-EURCAD Ngaphantsi kweNqanaba le-1.5675 kwiLinge lokuqhubeka nokuThengisa ecaleni
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EURCAD-nge-30 kaSeptemba
Imali enye yaseYurophu ijikeleze nge-0.45% ngokuchasene neDola yaseCanada ukusukela ekuqaleni kweseshoni yangoLwesithathu. Isibini semali siphule inqanaba elisezantsi le-1.5675 kumzamo wokuqhubela phambili ngorhwebo. Ngenxa yokuba inqanaba lotshintshiselwano lophule umda, abathengisi banokucinezela isibini esisezantsi se-EURCAD kwezi seshoni zale veki.
Amanqanaba okumelana: 1.6153, 1.5970, 1.5739
Amanqanaba enkxaso: 1.5540, 1.5415, 1.5039
Njengoko kubonisiwe kwitshathi yemihla ngemihla kwimeko engeyiyo, inkxaso yangoku kwangoko inokwenzeka kulungelelwaniso lomndilili ohambahambayo 5 kunye ne-13 kumanqaku ayi-1.5600. Ukutyibilika phantsi kwesi siseko sibalulekileyo se-1.5600, ukuxhasa ngakumbi iziseko zihlala kumgangatho onyukayo kunye nenqanaba le-1.5540 kunokuba ngumceli mngeni wokuntywila.
Ukutyhala okuphezulu kunokuvavanya kwakhona inqanaba le-1.5739 kunye ne-spike ukuya kunyuka ukuya kumcelimngeni wokuphakama konyaka kwizikhephe ze-1.6000. Isishwankathelo, amanqanaba akufutshane nemida kuya kufuneka ukuba aphulwe ukukhawulezisa ixabiso kwicala elinxulumene noko.
I-EURCAD yeXesha elifutshane leNdlela: Ukulinganisa
I-Intraday bias kwi-EURAUD ihlala ibuthathaka kwicala elisezantsi kwaye ukudityaniswa phantsi kwenqanaba le-1.5675 kunokudlulela phambili. Kwicala elingasentla, ikhefu elizinzileyo lenqanaba lokumelana ne-1.5739 liya kuphakamisa ukuba ubuncinci kulungiso lokuwa ukusuka kwinqanaba le-1.5970 eliphezulu.
Olunye unyuko kufuneka lubonwe ukuya kuma-38.2% ekubuyiselweni ngokutsha kwe-1.5739 ukuya kwi-1.5540 kwinqanaba le-1.5970. Nangona kunjalo, ukwaliwa ngenqanaba le-1.5739 kuya kugcina kufutshane nokuqina kwexesha elinye ukuwa kwinqanaba le-1.5540 kamva.
Ixabiso leXRP / USD lihamba phakathi kwe- $ 0.24 kunye ne- $ 0.23 yamaXabiso amaxabiso
I-XRP / USD yentengiso ngoSeptemba 30
Kwimeko apho iinkunzi zeenkomo zifumana amandla angakumbi okophula inqanaba lokumelana namandla, inqanaba lexabiso le- $ 0.25 alinakubamba kwaye ixabiso liya kufikelela kwinqanaba lokumelana ne- $ 0.27 kunye ne- $ 0.29. Intshukumo ye-bearish iya kuqhubeka ukuba iinkunzi zeenkomo ziyasilela ukuphula ukuhlangana kwinqanaba leedola le-0.25.
Amanqanaba okumelana: $ 0.24, $ 0.25, $ 0.27, $ 0.29
Amanqanaba enkxaso: $ 0.23, $ 0.22, $ 0.20, $ 0.17
I-XRPUSD ikwimo yokutshintsha kwetshathi yemihla ngemihla. Ukwenziwa kwepateni yekhandlela "yeTweezer ezantsi" ngoSeptemba 24 luphawu lokuba iinkunzi zeenkomo zikulungele ukuthatha intengiso. Iinkunzi ziqalise ukunyuka okuya kwinqanaba lokumelana ne- $ 0.25. Endleleni, iinkunzi zeenkomo zilahlekelwa ngamandla kwaye ukwanda kuthintelwe, ngokufanayo, uxinzelelo lweebhere alwanele ukuqhuba ingqekembe ecaleni, emva koko ixabiso liqala ukudityaniswa kwinqanaba lamaxabiso angama- $ 24 kunye ne-23.
Itshathi yemihla ngemihla yeXRPUSD, ngoSeptemba 30
Amaxesha ama-9 ama-EMA kunye nama-21 amaxesha e-EMA asondela omnye komnye kwaye umgama phakathi kwezi zimbini uya uncipha ngelixa ixabiso lithengisa phakathi kwezi zimbini. Ukuqhawuka kwinqanaba lamaxabiso angama- $ 23 kuyakwenza ukuba ingqekembe iqhubeke nokuma kwayo kwinqanaba lokuxhasa ukuya kuthi ga kwinqanaba lenkxaso le- $ 0.22 ukuya kwi- $ 0.20 enokuthi inyuke iye kwi-0.17 yeedola. Ukungena kwinqanaba eliphezulu le- $ 24 kuya kubangela ukuqhubeka kwendlela yokuqhubela phambili kwi-0.25, i- $ 0.27, kunye ne-0.29 yexabiso lexabiso.
Kwimbonakalo yexesha eliphakathi, iXRPUSD iyahluka. Intshukumo ye-bullish eqale nge-24 kaSeptemba ayinakho ukuqhubeka ngenxa yobuthathaka kumandla eenkomo. Uxinzelelo lweebhere lubuthathaka ngokulinganayo ngalo mzuzu kwitshathi yeeyure ezi-4. Ngamanye amagama, umfutho weeBulls kunye neeBhele ukwi-equilibrium.
I-XRPUSD 4 itshathi yeeyure, ngoSeptemba 30
tags Marketing, Uhlalutyo Technical, XRP
Uhlalutyo lwamaxabiso eXAU / USD-Septemba 30
Igolide (i-XAU / i-USD) ebhalwe ezantsi kwiseshoni yaseYurophu ngoLwesithathu kwaye yagqityelwa ukurhweba kwindawo eyi- $ 1885.
Isinyithi esimthubi sadibana nonikezelo olutsha kufutshane nesithintelo se- $ 1900 ngolwesiThathu, eyathi yamisa ukubhengezwa kwale veki ngenkxaso yeedola ezili-1849. Ukubuyela umva kumele intshukumo yokuqala ye-bearish kwiintsuku ezintathu ezidlulileyo kwaye yathathelwa ingqalelo yipikniki entle kwidola yaseMelika (DXY).
Ngeli xesha, Ingxoxo kaMongameli wokuqala wase-US phakathi kuka-Mongameli uTrump kunye neqela eliphikisayo le-Democratic u-Joe Biden basilele ukuhlekisa ngeemarike, njengoko uninzi bekulindelwe ukuba luzakwenzeka. Nangona kunjalo, ibango likaTrump lokuba iziphumo zonyulo zinokungavunyelwana emva koSuku loNyulo luye lwongeza ukungaqiniseki okongeziweyo kwiimarike. Oku kuza phakathi kwenani elonyukayo lamatyala e-COVID-19.
Ngaphandle kokubuyiswa kwebhodi eqinileyo kwi-USD, ukunyuka kwi-US Treasury bond isivuno kuye kwongeza ekuphumeni kwebango kwizinto ezingabonakaliyo. Nangona kunjalo, amagqabantshintshi kaTrump kwingxoxo-mpikiswano yayizolo abangele amaza amatsha omngcipheko-wokuthintela ukuthengisa.
Ukuqhubela phambili, abathathi-nxaxheba beemarike baya kujonga kwi-docket yezoqoqosho yase-US namhlanje-ebonisa ingxelo ye-ADP, ingxelo yokugqibela ye-Q2 GDP, iChicago PMI, kunye nedatha yeNtengiso yeKhaya elindelekileyo- imikhondo. Ngapha koko, amagqabantshintshi anempembelelo avela kumalungu e-FOMC kamva namhlanje anokuchaphazela amaxabiso e-greenback kwiseshoni yaseNyakatho Melika.
Igolide (XAU) yeXabiso lokuQikelela - ngoSeptemba 30
Amanqanaba okubonelela: $ 1900, $ 1923, kunye ne-$ 1939
Amanqanaba okufuna: $ 1876, $ 1849, kunye ne-$ 1844
Ngokobuchwephesha, iXAU / i-USD isilele ukwaphula inkxaso eyomeleleyo ye- $ 1900 yengqondo. Okwangoku, silindele ukuphinda ubuye kuloo mgca, onokubaluleke kakhulu kwinto eyenziwa ligolide elandelayo. Okwangoku, kwezi yure zidlulileyo, siyibonile irekhodi yegolide ilandelana imigangatho esezantsi, ibonisa ukuba siyakubona ukurhweba kuxabisa i-1876 yeedola ngenkxaso ngaphambi komgca we-1900.
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Ethereum (ETH): I-ETH iboshwe ngamanqanaba angaphantsi kwe- $ 370 yokuchasana
U-Ether ukwindlela esecaleni kwiintsuku ezintlanu ezidlulileyo
Mhlawumbi ukuqhekeka kusondele
Ixabiso langoku: $ 356.80
Intengo yeNtengiso: $ 40,249,317,062
Umthamo wokuThengisa: $ 11,822,143,664
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Ethereum (ETH) ngoSeptemba 30, 2020
Ukulandela ukubuyela kwakhona kwangoko ngoSeptemba 24, u-Ether uthengise ngaphantsi kwe-370 yeedola. Ixabiso le-Ether linamathele kwindawo yokumelana kwiintsuku ezintlanu ezidlulileyo. Eyona nto iphambili kukuba ukuba abathengi bayayaphula indawo yokumelana kunye nexabiso lokutyhala ngaphezulu kweedola ezingama-390, i-Ethereum iyakuphuma kulungiso olusezantsi. Mhlawumbi, ukunyuka okuphezulu kuya kuqhubeka kwakhona. Ngokuchaseneyo, ukuba ingqekembe ijongene nokwaliwa kukuchasana okwangoku, intengiso iya kuwa. Iibhere zinokuzama ukuntywila ingqekembe iye kwindawo yayo ephantsi yama-310.
Ixabiso lisezantsi kwee-EMA ezibonisa ukuba ingqekembe ayinakonyuka. Endaweni yokuwa okanye amaxabiso atshintshayo aya kuqhubeka. Ingqekembe ikwinqanaba lama-47 le-Index ye-Relative Strength period 14. Oko kukuthi, ingqekembe ikummandla weDowntrend kwaye ungaphantsi komgangatho ophakathi 50.
Akuqinisekanga ngokwalathiswa kwamaxabiso njengoko ingqekembe ibiyelelene kwiintsuku ezintlanu ezidlulileyo. Uhlalutyo lwesixhobo seFibonacci luya kubamba ukuba i-Ether iwa kwaye amaxabiso ayaphula inkxaso ebalulekileyo kwi-310 yeedola. Iimarike ziya kuqhubeka nokuwa kwayo kwi-1.272 Fibonacci extension okanye i- $ 260 ephantsi.